Fumana i-Angle yaseKhaya kwiiNdaba zeNdaba zeSizwe
Fumana i-Angle Local
Qala ngebali leendaba zelizwe, uze ufumanise impembelelo yendawo
Amathuba aya kuthatha ixesha elifutshane ukuba uhlawule umsebenzi wokubika ingxelo kazwelonke kwizinto ezizithandayo zeThe New York Times okanye iWashington Post .
Kodwa unokufumana inkcazo yokugubungela amabali amakhulu ngokufumana i-angle yangaphakathi kwiindaba zelizwe nakwamanye amazwe.
Abahleli bambiza le "ukufumana ibali." Ngokuyisiseko kubhekisela ekufumaneni ukuba iziganeko ezenzeka kwizinga likazwelonke ziya kuthintela uluntu lwasekuhlaleni. Ngoko nali iindlela onokuzifumana kuzo iindaba zeendaba zelizwe kwiintlobo ezahlukeneyo zeebhere .
Ukutyelela umkhosi wendawo okanye iZiko loLondolozo lweSizwe kwindawo yakho ukuba ubone ukuba unokufumana amajoni abathumelayo, okanye abuyele ekhaya, kumazwe apho i-US imfa. Udliwano-ndlebe nabo malunga namava abo.
Okanye mhlawumbi kukho indawo encinci yababaleki okanye abafuduki bevela kumazwe aphangiweyo imfazwe kwindawo yakho. Thetha kubo ukuba bafumane imbono yabo kwimicimbi kwilizwe labo.
Ingaba uqoqosho lwesizwe kutyhutyhile okanye kwi-rebound? Udliwano-ndlebe ngunjingalwazi wezomnotho weengingqi malunga nento eyenzekayo. Ngaba abathengi bathengisa okanye bahla? Thetha nabathengisi basekuhlaleni ukuba babone indlela abahamba ngayo.
Ngaba ukuthengisa ekhaya kusempilweni okanye kubuthathaka? Thetha kubemi beendawo kunye nabakhi bekhaya.
Ngaba ixabiso lentengo liphezulu? Intloko kwisikhululo segesi sendawo kunye nodliwano-ndlebe nomnini kunye nabanye abathengi. Ingaba iqumrhu elikhulu lilahla amawaka abasebenzi? Khangela ukuba banayo isebe lendawo okanye inkxaso.
Ingaba iCongress okanye ipalamente yakho yombuso idlulisele umthetho omtsha oya kuthintela uluntu lwakho?
Udliwano-ndlebe nomphathi-dolophu okanye amalungu ebhodi yeedolophu ukuze bathathe izinto zabo. Ingaba inkxaso karhulumente kunye neyezemfundo ukuba oomasipala banwebe okanye bathathe isivumelwano? Kwakhona, thetha namagosa kwindawo yakho ukuba ubone indlela iinkonzo zendawo kunye nebhajethi iza kuchaphazeleka ngayo.
Ngaba iimvavanyo zokulinganisa ezilinganiselweyo kwiimathematika nokufunda okanye ngaphantsi komhlaba? Ngaba urhulumente wesigqeba ubeka imigangatho emitsha ukuba izikolo ezikuloo ndawo mazihlangane nazo? Jonga ukuba isithili sakho esikolweni sichaphazeleka njani. Ngaba inkxaso-mboleko yemali mboleko yomfundi iyomisa? Thetha kubaphathi bekholejini beendawo ukuba babone oko kuza kuba yintoni.
Ngaba ubugebengu obundlobongela bukhulayo lonke? Ngaba ukusetyenziswa kweziyobisi ezingekho mthethweni okanye phezulu? Hlola kunye namapolisa asekuhlaleni ukuba ubone ukuba ziphi iindawo ezikulo dolophu yakho.
IzeNzululwazi, iMyeza kunye neThekhnoloji
Ngaba abaphandi baye baphumelela ekhatheni komhlaza, i-AIDS, i-Alzheimer's's disease okanye izinto ezifana? Thetha kumagqirha kunye nabaphandi kwisibhedlele sokufundisa sendawo ukuze babone oko kuza kuba yintoni. Ingaba imoto yenkampani inikeza isithuthi esitsha esifumana iikhilomitha ezingama-100 ngegaloni? Udliwano-ndlebe kubaxumi kumthengisi wendawo ukuze babone ukuba banomdla.
Ukuzonwabisa & Imidlalo, Imfashini kunye neNkcubeko
Ngaba ngaba abalandeli belizwe batyhutyayo kwiimidlalo zee-movie zokuqala ze-sci-fi blockbuster?
Intloko kwi-cinema yakho yangingqi. Ingaba umdlalo omtsha wevidiyo uhamba ezinqabeni zesitolo? Intloko kwivenkile yemidlalo yevidiyo. Ngaba i-70s-ithonyelwe ukufakela izinto kwi-runs yaseParis naseNew York? Khangela i-boutique ye-fashion boutique ukuze ubone oko kuthengisayo.
Iintlobo zeeNdaba zeeNdaba zabathengi
Ukusebenza kwi-Associated Press
Kutheni i-Journalism Ethics and Objectivity Matter
Ukufunda ukuHlela iindaba zeendaba ngokukhawuleza
Indlela Yokulungiselela I-Chemistry Lab
Inkcazo kunye neMimiselo yeeNgxelo eziHlanganisiweyo
Iindawo eziphambili ze-Best Atlantic City Poker Rooms
Iklasi eValiwe (amagama)
IMithetho yokuBhala yeBogus
IYunivesithi ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Vula (I-Golf Tournament)
UMgangatho weMigangatho Ukuthelekiswa kweeNyuvesi eziPhambili
IiShishini zokuSebenza ngeSayensi
Ukuxubusha isenzi 'Skier' ('ukuSuka')
Isikhokelo Esilula Sendlela Yokufunda Abafundi AbaQalayo
Ukudibanisa isiFrentshi '-er' i-Verb 'Maquiller' ('Ukulungiselela umntu')
Indlela Yokususa Kwinqanawa
Imithetho Yemizila Yeehambo
Ukuhlaziywa kweNewgy Robo-Pong 2050 I-Robot yeTable eTable
Izikolo ze-SAT zokwamkelwa kwiiNyuvesi zeMetro Atlantic Athletic
I-Supersymmetry: Ukuxhamla koMoya ophakathi kweParticles
I-Afrofuturism: Ukucinga ngekamva leAfrika